बिचित्र संसार – Page2– shubhabihani
Home / बिचित्र संसार (page 2)
विश्वमा सबैभन्दा पहिले नग्न बस्ती कुन देशमा बस्यो होला ? पत्यार नलाग्न सक्छ, यस्तो निर्वस्त्र वस्ती दुनियामा सबैभन्दा पहिले छिमेकी देश भारतमा बसेको हो ।
झण्डै १२५ वर्ष पहिले अर्थात् सन् १८९१ मा भारतको मुम्बई नजिकै रहेको थाणेमा विश्वकै पहिलो न्युडिस्ट कोलोनी अर्थात् नग्न बस्ती बसेको थियो ।
उक्त नग्न बस्तीको नाम थियो, द फेलोसिप अफ द नेकेड ट्रस्ट । संस्थापक थिए, चाल्र्स एडवार्ड गार्डन क्रार्फड । उनी तत्कालीन न्यायाधीश पनि थिए ।
एडवर्ड कारपेन्टर नामका व्यक्ति चाहीँ भिक्टोरियाकालीन बेलायतमा कर्मी थिए । उनलाई गे गुरु पनि भनिन्थ्यो । भारतका रविन्द्रनाथ टेंगोरसँग उनको दोस्ती भयो । एडवर्डले चाल्र्सद्धारा लिखित चारवटा पत्र फेला पारे । जसमा चाल्र्सले आफुले खोलेको फेलोसिप अफ नेकेड ट्रस्टको नाम उल्लेख गरेका थिए ।
यो न्युडिस्ट क्लब निकै सानो थियो । जसमा तीनजना सदस्य थिए । चाल्र्स क्रार्फड, एन्ड्रू र केलग काल्डरवुड । चाल्र्स एक विदुर थिए भने अन्य दुईजना एक मिसनरीका छोराहरु । पछि एक अर्की महिलाले पनि यो न्युडिस्ट क्लबको सदस्यता लिन चाहेकी थिइन् तर दिइएन ।
चाल्र्सले आफ्नो पत्रमा लेखेका छन्ः हामीले दुई दिनको विदा कपडा नलगाइकन मनाउँथ्यौँ । बिहानदेखि रातिसम्म नांगै बस्थ्यौं । त्यसक्रममा घरका कामदारलाई पनि विदा दिन्थें ।
तर त्यसको एकवर्ष भित्रैमा चाल्र्सले एथेल नामक एक महिलासँग पुनर्विवाह गरेर रत्नागिरी गए । त्यसपछि उक्त निर्वस्त्र वस्ती बन्द भयो ।
अब रक्सीको बोतल बोक्नै परेन, चिनले बनायो वाइन राख्ने लेडिज ब्याग
वाइन पारखी महिला मित्रहरु, तपाइँको विन्ती सायद सुनियो क्यारे । त्यसैले यस्तो लेडिज ब्याग बनाइएको छ जहाँ दुई गिलास वाइन खन्याउन सकिन्छ ।
द बेल्ला विटा नामक उक्त लेडिज पर्समा वाइन खन्याउने एउटा धारो छ भने ब्यागभित्र झण्डै डेढ लिटर वाइन अट्ने कोठा छ ।
यो वाइन ब्यागलाई ७७ डलर मूल्इ तोकिएको छ । फेसन र स्टाइलमा ध्यान दिने वाइनका पारखी युवती तथा महिलाहरुको हितलाई ध्यानमा राख्दै यो ब्यागको डिजाइन गरिएको हो ।
बेला बिटाका सर्जक हुन् गुनर ह्यामरबेक र मेरिसा चाइना । अमेरिकाको एरिजोनामा रहेको बेला बिटा कम्पनी खासगरी वाइन तथा फूडका लागि प्याकिङ र एसेसरिज डिजाइन गर्ने गर्दछ ।
वाइन ब्याग चाहीँ यसको सबैभन्दा पछिल्लो सिर्जना हो । वाइनका पारखीहरुले कहीँ डुल्ज जाँदा यो झोलाको माथिल्लो भागमा रहेको प्वालबाट वाइन खन्याउनेछन् र आफुले चाहेको बेला झोलाको मुनिपट्टि रहेको धारो खोलेर वाइन ग्लासमा थापेर वाइन पिउन सक्नेछन् । हेरौँ यो गज्जबको वाइन ब्यागका केही तस्वीरहरु एजेन्सी
हेर्नुस् यस्तो छ कुकुरको क्याटवाक (फोटो फिचर)
र्याम्पमा सुन्दरी मोडेलहरु क्याटवाक गरेको त देख्नुभएकै होला । तर रुसमा भने युवतीहरु होइन कुकुरहरु क्याटवाकमा उत्रिए ।
रुसका पिटर्सबर्गमा भएको वाषिर्क पहिरन परेडमा एक सय भन्दा धेरै कुकुरहरु विभिन्न पहिरनमा सजिएर सडकमै क्याटवाक गरे ।
कुकुरहरुले अनेक खालका परम्परागत पहिरनहरु समेत लगाएका र केही पहिरनको धार्मिक अर्थ पनि थियो ।
एउटा कुकुर चाहीँ चर्चित फिल्म पाइरेट्स अफ क्यारेबियनको पात्र क्याप्टेन ज्याक स्प्यारोको स्वरुपमा थियो ।
कतिपय कुकुर टाउकोमा टोपी लगाएर क्याटवाकमा ओर्लिए भने कतिपयले फूलका गुच्छारुपी पहिरनमा सजिएका थिए । एउटा कुकुर तिब्बती पहिरनमा थियो भने एउटा चाहीँ गाइजस्तै रुपरंगको पहिरनमा ।
भ्यासिलेभ्स्की टापुमा शनिवार भएको उक्त समारोहमा कुकुरहरुको लर्को झण्डै २४ मिटर लामो भएको थियो ।
महिलालाई किन दिइँदैछ उठेरै पिसाब गर्ने तालिम ?
महिलाहरुका लागि सार्वजनिक शौचालयको प्रयोग साँच्चीकै कष्टकर हुन्छ । सार्वजनिक शौचालय फोहोर हुने हुनाले बसेर पिसाब फेर्नुपर्ने महिलाका लागि संक्रमण तथा जिउमा फोहोर लाग्ने जोखिम हुन्छ । त्यसैले धेरै महिलाहरु सार्वज्निक शौचालयमा पिसाब नगरी पिसाब रोकेरै बस्न जाती मान्छन् ।
महिलाहरुको यो समस्यालाई ध्यानमा राख्दै अष्ट्रेलियाको ग्रिन पार्टीले महिलाहरुलाई उठेर पिसाब फेर्ने तालीम दिँदैछ ।
दुनियाका कुरुप माछाहरु, यी तस्वीर हेर्दा घिन लाग्नेछ माछा खान
माछा देख्नुमा जति सुन्दर हुन्छ खानुमा उत्तिकै स्वादिष्ट । माछा खानु सरीरका लागि निकै पौष्टिक तथा स्वस्थ हुन्छ । तर यो दुनियामा केही माछा यस्ता हुन्छन् की जसलाई एकचोटीमात्र हेर्नुभयो भनेपनि तपाइँलाई माछा खान घिन लाग्नेछ ।
हामी कुरा गरिरहेका छौँ दुनियाका सबैभन्दा कुरुप तथा खतरनाक माछाहरुको बारेमा । जसमध्ये एउटा माछाको नाम हो सी स्पाइडर । जुन आन्ध्र महासागरमा पाइन्छ । यो माछाको आँखाको गेडा बाहिर निस्किएको भद्दा हुन्छ । आँखामा प्रकाश सोस्ने विशेष क्षमता हुन्छ ।
त्यस्तै अर्को कुरुप माछा हो मोंकफिस । यो पनि सामुदि्रक माछा हो । यो माछा देख्दैमा घिनलाग्दो हुन्छ ।
ऋर्को कुरुप माछाको नाम हो सिटोर्हिनस म्याक्सिमस । यो ह्वेल शार्क पछि विश्वको दोश्रो ठूलो माछा हो । यो पनि देख्नमा निकै कुरुप हुन्छ ।
स्केबर्ड फिस नामक कालो रंगको माछा पनि कम कुरुप हुँदैन ।
गि्रनेडिएर फिस नाम माछाको आँखा पनि फ्यात्त बाहिर निस्किएको हुन्छ र जिउ पनि निकै कुरुप हुन्छ । सायद यो माछालाई हेर्दा पनि यसको मासु खाने आँट गर्न गाह्रै पर्छ ।
फंगटुस फिस नामक माछा समुद्रमा पाइने सबैभन्दा लामो दाँत भएको माछा हो । यसले पनि कुरुपताको हद पार गरेका हुन्छ ।
चुम्बन गरेर कार पाउने अनौठो प्रतियोगिता, युवतीले गरिन् ५० घण्टा चुम्बन
वास्तवमा कार किन्नु एउटा ठूलै लगानी हो । पुरस्कारका रुपमा कार पाइने लक्की ड्रमा मानिसहरु लोभिएको देखिएकै छ । कारको सपना नहुने को होला र ? तर सपना सबैको पूरा हुँदैन । हालै सोसल मिडियामा कार जित्ने एक अनौठो मामिलाले खुबै चर्चा पायो ।
उक्त प्रतियोगितामा पैसा खर्च गर्नु थिएन, केवल चुम्बन गरे पुग्दथ्यो । त्यो पनि लगातार ५० घण्टा ।
उक्त प्रतियोगिता जितिन् ३० वर्षकी दिलिनी जयसूर्याले । ती महिलाले यो सावित गरिन् की यदि कुनै कुराको अठोट लिनेहो भने असम्भव भन्ने केही छैन ।
प्रतियोगिताको नियम निकै सजिलो थियो । नियमानुसार जसले अन्तिम समयसम्म कारलाई चुम्बन गर्दथ्यो उहीँ विजेता बन्दथ्यो र कार चुम्बन गरेको कार पुरस्कार पाउँथ्यो ।
अमेरिकाको टेक्सासको अस्टिनमा भएको हो यो अनौठो प्रतियोगिता । KISSaKIA नाम उक्त प्रतियोगितामा कारलाई ५० घण्टासम्म चुम्बन गरेर जयसूर्याले किया अप्टिमा एलएक्स कार जितिन् ।
अस्टिनको किस एफ एमले उक्त अनौठो प्रतियोगिताको आयोजना गरेको थियो । २० जना प्रतियोगीले कारलाई चुम्बन गर्ने प्रतियोगितामा भाग लिए । तर धेरै प्रतियोगी केही बेरमै थाके । पहिलो ७ घण्टासम्म त उक्त प्रतियोगिताको लाइभ प्रशारण नै गरिएको थियो र
स्मरण रहोस् किस गरेर कार जित्ने यस्तो अनौठो प्रतियोगिता अस्टिनमा पहिलोपटक भएको होइन । चीनमा सन् २००७ देखि नै चेभ्रोलेटले यस्तै प्रतियोगिता गर्ने गरेको छ । अमेरिकाको मिचिगनमा सन् २०१२ मा भएको यस्तै प्रतियोगितामा एक व्यक्तिले लगातार ७० मिनेटसम्म कारलाई चुम्बन गरेर सेडान कार जितेका थिए । एजेन्सी
तीन वर्ष गर्भ बोकेपछि महिलाले जन्माइन् बाख्राको पाठो !
मान्छेले विभिन्न जनावरजस्तै बच्चा जन्माएका घटनाहरु बेलाबेलामा चर्चामा आउँछन् । हालै एउटा यस्तै अनौठो घटना नाइजेरियामा भएको छ ।
नाइजेरियाकी एक महिलाले बाख्राको पाठो जस्तै बच्चा जन्माएकी छिन् । अझ अनौठो त के भने ती महिला पछिल्लो ३ वर्षयता गर्भवती थिइन् । ३ वर्षसम्म पेटमा राखेको पाठो उनले हालै जन्माएकी हुन् ।
तस्वीरमा देखिएको सुन्दर गाउँ विक्रीमा छ । किन्न चाहनेले २८ लाख डलर (करिब २८ करोड रुपैयाँ) ठिक पानुपर्ने छ ।
यो गाउँ क्यानडाको प्रख्यात सहर भ्यान्कुवरबाट केही किलोमिटरको दुरीमा अवस्थित छ । गाउँको नाम हो, रदन बिक । यो गाउँ यस अर्थमा पनि सुन्दर छ कि, यहाँ सयौं हलिउड फिल्मका सुटिङ भएका छन् ।
प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण यस गाउँमा एउटा सुन्दर तलाउ पनि छ । भ्यान्कुवरबाट थुप्रै पर्यटकहरु यो गाउँको अवलोकन गर्न आउने गर्छन् । गाउँमा १९ औं शताब्दीका २२ वटा घर छन्, जसमा थोरै मान्छेहरु बस्छन् । गाउँको क्षेत्रफल ६० लाख स्क्वायर फिटमा फैलिएको छ ।
यहाँ हर्स राइडिङको मज्जा पनि लिन सकिन्छ । गाउँमा एउटा चर्च, एउटा प्राचिन किल्ला, एउटा हुलाक कार्यालय (जुन बन्द भइसकेको छ) रहेका छन् ।
यस गाउँका मालिक हक जेरेमी सिरोइस नामका व्यक्ति हुन् । जेरेमीका अनुसार यो सानो गाउँमा मानिसहरु घट्दै गइरहेका छन् । बचेखुचेका मानिसहरु पनि सहरतिर पलायन हुन थालेका छन् ।
उनले गाउँको मूल्य २८ लाख डलर राखेका छन् तर अहिलेसम्म ग्राहक फेला पारेका छैनन् । गाउँ हेर्न धेरै आए पनि किन्न भने हिच्किचाउने गरेको जेेरेमी बताउछन् ।
‘सेक्स’का बेला सिरहामा दीपिकाले पतिको लिङ्ग काटिदिइन्
लहान । सिरहाको लहानमा घरायसी विवादका कारण एक महिलाले आफ्नै पतिको लिंग काटी घाइते बनाएकी छिन् ।
लहान नगरपालिका वाडा नम्बर ३ डगराहा टोलमा १८ वर्षीय दीपिका कुमारी महतोले आफ्नै श्रीमानको लिङ्ग र अण्डकोष काटेर घाइते बनाएकी हुन् ।
लहान ३ बस्ने सुनिल कुमार महतो र दीपिका कुमारी महतोबीच गत वैशाख २२ गते सिरहा धनगडीमाई नगरपालिका सिमरटोकीमा मागी विवाह भएको थियो ।
घरायसी विवादका कारण मंगलबार राति शारीरिक सम्पर्क गर्ने क्रममा २६ वर्षीय महतोलाई पत्नी दीपिकाले लिंक काटेर घाइते बनाएकी हुन् । घाइते महतोको लहानमा उपचार भइरहेको छ ।
दीपिकालाई इलाका प्रहरी कार्यलय लहानले नियन्त्रणमा लिइ थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यलय लहानका डीएसपी राजकुमार केसीले जानकारी दिए ।